Maxaa shumacii loo damiyey?
Tuesday July 16, 2019 - 07:22:24 in Wararka by
Amintu waxay ahayd 08:00am oo gow ah 12kii Bishan Luulyo, waxaanu ku dhaqaaqnay socod gaaban oo horay noogu qorsheysnaa kaasoo aan ku gaareynay deganka Goowebweyn oo kismaayo qiyaastii u jira 13 - 14 KM. waxaanu wadanaa gaari Basa/caasi ah oo aanu ku
Amintu waxay ahayd 08:00am oo gow ah 12kii Bishan Luulyo, waxaanu ku dhaqaaqnay socod gaaban oo horay noogu qorsheysnaa kaasoo aan ku gaareynay deganka Goowebweyn oo kismaayo qiyaastii u jira 13 - 14 KM. waxaanu wadanaa gaari Basa/caasi ah oo aanu ku raacnay xaaskayga (Ister Carte iyo aniga Garoon) Jaamac Fariid iyo qoskiisa oo ka koobnaa xaaskiisa Hodan Naleeye, Mohamed, Naleye iyo Xasan oo caruurtooda ahaa, gaariga waxaa nagu wada fariid aniguna kursiga hore ee dareewalka ku xiga ayaan fariistay.
Kolkii aan hubsanay in aan gaariga ku dhanahay oo aan albaabka u laabnay, waxaan u sii jeensanay dhanka hotel Madina Ex Hotel Cascasey,
Hoteelka iridisa markaan istaagnay ayuu Jama Fariid wacay nin uu kolkaas ugu yeeray mahad lkn anigu aqoon isuma lahayn waxaanse markii dame ogaaday in uu yahay Mahad Cabdullaahi Garguurte ganacsade caan ka aha tansaaniya.
Mahad waxaa waheliyey 3 ruux gabar isla Tanzania u dhalatay oo magaceeda iigu sheegtay Natasha iyo laba nin oo chines ah oo aanan magacyadooda xasuusan. Kolkaan is baranay ayey soo galeen gaaariga waxaan u sii jihaysanay degaanka Gobweyn oo Jama Fariid ku lahaa beer weyn oo waqtigan uu ku waday balaarin, gorof biyaha kaydiyana uu ka qoday , kolkaan beerta gaarnay waxaan indha indhayn ugu dhaqaaqnay beerta waxaan kula kulanay kooxdii meesha uga shaqaynaysa waxaan ku cabnay qumbe (Coconut) dabadeedna nin ka mid ahaa chines-kii ayaa sharaxaad iyo aragtiya cucub ka siiyey sida uu uga faa’idayan lahaa biyaha iyo sida loo jeexay kanaalada beerta waraabiya.
Intaas ka dib waxaan nimaadnay isla magaalada Gobweyn waxaan fariisanay maqaaxi yar oo ku dhextaal tuulada, waxaan ka cabnay shaax waan sheekaynay, ku kaftanay isla wada qosolnay, marbana ma hilaamayo quruxdii iyo farxadii ka muuqatay dhamaan dadkii aan isla soconay oo ka koobnaa 12 qof oo hada ay ka bedqabaan 6 qof halka 6dii kale ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo qaar dhaawacmay.
Markii aan shaaxa dhamaysanay ayaan u dhaqaaqnay dhanka webiga oo aan u lugaynay waxaana ugu tagnay lo’ badan oo laga waraabinayey webiga daankiisa sawiro ayaan qaadnay. Waxaan la sheekaysanay lo’ jirtii iyo dad kale oo goobta u daawasho joogey.
Markii aan safarkii goobweyn soo dhamaysanay ayaan ku soo laabanay isla maqaaxidii caano geel ayaan ka cabnay deedna waxaan isku raacnay in aan magaaladii Kismayo ku soo laabano maadaama ay jimce ahayd oo salaadii jimacadu na sugaysay. Waan soo dhaqaaqnay intii aan wadada soo maraynay waxaanu dhex soconay xoola badan oo nooc walba ah ari, lo’ iyo geelba. Quruxda degaanka ka muuqatay qofkasta oo naga mid ahaa wuxuu ku hadaaqayey dhulkeena nimcaa fadhida waa in lagu soo laabtaa, dadka soomaaliyeed waa in ay soo noqdaan si ay u maalgashtaan dalka.
Markii aan madaalada soo gaarnay 12:30 saladii jimacaduna naga daahsantahay waxaan tagnay Hotel Madina oo aan dhignay Mahad iyo 3dii qof ee ajnebiga ahaa wayaan u siii gudubnay xaafadii aan isala deganayn Jama Fariid. Waxaan dhignay caruurtii iyo xaasaska deedna waxaan ku laabanay masaajidka.
Intii aan isla soconay ayuu ii sheegay in uu dirayo sabtida qolyahan martida ah jooga ee ajaanibta ah sidoo kale wuxanu iska waraysanay qorshayaal iyo hami badan oo aan waxba ka hirgelin.
Sidii uu balanku ahaa ayaa Jama iyo marwadiisii Hodan ku laabteen Hotel Madina si ay u sagootiyaan shaaxna ula cabaan martidii u joogtey. Lkn nasiib daradu waxay ahayd in aan maqlay qarax sacadu markay ahayd 17:53 isla markiiba dareen baa I galay waxaan wacay numberkiisa igama qaban qof kale ayaa ii sheegay in Hotel Madina wax ka dheceen isla markiiba waxaan isku boobay dharka waana baxay si aan xaalada jirta u ogaado markastana waxaan wacayey numberadooda laakiin nasiib daro allah ma qadarin in aan codkooda maqlo.
Habeenkii oo dhan soo jeed iyo war dhiila wata oo iska soo daba dhacayey subaxnimadii sabtida 13ka bisha ayaan xaqiiqsanay geerida lamaanayaashii is jeclaa hodon iyo Jama iyo asxaabtii kale ee la fadhiday uu ka mid ahaa Mahad Garguurte. Sidoo kale waxaa dhaawac culus ah Natasha gabadhii Tanzanian-ka ahayd iyo nin chines ah
ALLAH ha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawaca ahna allah ha u booga dhayo.
W/Q: Abdow Garoon